प्रदेश सरकारकाे औचित्य खाेजाैँ ! – newslinesnepal
प्रदेश सरकारकाे औचित्य खाेजाैँ !
प्रकाशित मिति : १७ आश्विन २०७७, शनिबार २२:१८
नेपालीको धार्मिक सहिष्णुता तथा जातीय सद्भाव देखिनसहने पश्चिमा र देशमा स्थिरता, शान्ति एवं समृद्धि देखिनसहने छिमेकीले थमाइदिएकाे सङ्घीयता अहिले नेपाल र नेपालीका लागि घाँडाे भएको छ। कसैका काला कर्तुत ढाकछोप गरिदिने सर्तमा शक्ति राष्ट्रहरूले थमाइदिएकाे मन्द विषले मुलुक झन् झन् कङ्गाल बन्दै जाने निश्चित छ। गरिब नेपालीले तिरेको करले कहिलेसम्म टिकाइरहने अजङ्गको भेडीगाेठ ?
हिजो बुटवल सङ्घीय राजधानी भन्दै सारा लगानी सरकारी संरचना निर्माणमा स्वाहा पारियो । फेरि दाङ भनेर संरचनामै ढुकुटी स्वाहा पारिँदै छ। यस्तो अवस्था अन्य प्रदेशमा पनि छ वा हुनेवाला छ। प्रदेश सरकार किन र केका लागि ? यसले आजसम्म गरेका सकारात्मक कामहरू केके छन् र प्रदेश सरकार नहुँदा पर्ने अफ्ठ्यारा केके हाेलान् भन्ने बारेमा बहस गर्नु आवश्यक छ। हामी नेपाल र नेपालीले थेग्न सक्ने दुईवटा संरचना ( स्थानीय र केन्द्र ) भएको नेपाली शैलीको सङ्घीयतामा जानु आवश्यक देखिन्छ ।
समाज गतिशील हुन्छ । समाजलाई सही दिशा निर्देश गर्न राजनीतिक दल र सही नेतृत्व चाहिन्छ । नेतृत्वले जनताको अपेक्षा अनुरूप कार्यनीति बनाउन नसके अर्को शक्ति जन्मन्छ । अब प्रदेश राजधानी कहाँ भन्ने विषयमा आपसमा झगडा गर्नुभन्दा प्रदेश सरकार खारेजकाे एजेन्डा लिएर शान्तिपूर्ण अभियानमा लाग्ने दल र नेतृत्वलाई साथ र समर्थन रहनेछ। यसमा आम जनता मात्र नभई हरेक राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरूदेखि कार्यकर्तासम्मको समर्थन रहने म देख्दछु। शक्ति राष्ट्रकाे मतियार बनेर जबर्जस्त भित्र्याइएका एजेन्डाहरूले मुलुकलाई थप कङ्गाल हुनबाट जाेगाउने समय आएको छ। अब बुख्याँचा हाेइन ; सच्चा नेपाली बन्ने समय आएको हाे कि ?